Toosan Flow Fabric Naasaha - Shiinaha Qingdao Aedis Fabric Naasaha
Micro Flow Fabric Naasaha
Toosan Flow Fabric Naasaha
Jilicsan Flow Fabric Naasaha
Power Flow Fabric Naasaha
Biiyaha Flow Fabric Naasaha
Permeable Fabric Naasaha
diffusers hawada FlowCon la dayuuradaha hawada POWERFLOW badan oo loo isticmaali karaa noocyo kala duwan oo balaadhan oo ah codsiyada. Waxay aad u hufan ee entrapping iyo isku qasin hawada yihiin. tuuro dheer ee dayuuradaha hawada ku ool ah u dhaqaajin karaan hawada kulul inay sagxada dhulka qabow. The mass iyo xawaare ka mid ah dayuuradaha waxay keeni kartaa wareegga hawada 10'-40 'ka baxsan diffuser ah. Iyadoo a diffuser FlowCon POWERFLOW xiran unit hawada qurxiyo a, hawada soo socda la kala firdhiyey karaan simani meel warshadaha waaweyn. Si loo badbaadiyo tamarta, hawada unheated lagu hagaajin karaa intii ka sii weynayd inay qas hawada diiran saqafka ee xilliga qaboobaha, ka dibna hoos u wareejiyey hawo u soo gasho goobaha shaqada xagaaga. taageere A iyo diffusers FlowCon POWERFLOW si fudud loo isticmaali karaa in la afuufo hawada diiran saqafka, midhona inay qas hawada dabaqa meeldhexaadka ah. kaydka Energy waxay noqon kartaa wax ku ool ah. In jawi shaqo oo kulul, wareegga hawada fudud loo hagaajin karo wax soo saarka. Diyaaradaha hawada POWERFLOW Large la istaraatiiji ah kartaa diffuser ah loo dabciyo xarumaha shaqada shaqsi. marinnada hawada dhar PowerFlow samatabbixin evaporative qaboojiyey hawada, midhona kor dekedaha waaweyn. Diyaaradaha hawada PowerFlow dhaxayn 1 "6" dhexroor. talooyinka Codsiga waxaa ka mid ah; warshadaha, meelaha bakhaaraynta, iyo wax soo saarka, Meelaha lagu jimcsado, Barkadaha, Tafaariiqda, dukaamada cuntada, iyo dhismayaasha ku meel gaar ah.
10 oz. Vinylalkohol dahaarka PolyesterHeerkulka High Poly Naasahacaag - Antimicrobial polyetylen
Cable Cayrin HALO HD Rail
Raashinka Dukaamada lagu jimcsado warshadahaWarshadaha Meelaha Barkadaha
Dhismayaasha Ku Meel Gaarka ah
Air Jet Dillaaca Condensate daadi soo jiita xadhkaha Fabric marinka rakiban Gudaha End Cap
Jiinyeer iyo Velcro Connections
polyetylen waa adkeysi kiimikooyinka ugu markaasay meel istaagi doonaan in ay ugu qayb hawada ka dhasha. Waxay leedahay heerkulka dhalaalid ah 180 ° F ah iyo in la nadiifiyaa karaa by biiyaha tuubada lagu buufiyo iyo burush. Polyetylen waa retardant dab iyo kulmay ASTM E-84 Class 1, AC 167, LC 1005. Warbixinta ICC-ES: ESR-2646.
300 D caag
caag waa dhar dahaarka leh fasalka premium. Waxay leedahay heerkulka dhalaalisa 350 ° F ah oo lagu mayro karaa qaybaha yar. Polyester waa retardant dab la kulmay ASTM E-84 Class 1, AC 167, LC 1005. Warbixinta ICC-ES: ESR-2646.
* Si Gaarka ah oo keliya.
Polyester waa dhar ah Qaxwo fasalka premium wakiilka ah antimicrobial. Waxay leedahay heerkulka dhalaalisa 350 ° F ah oo lagu mayro karaa qaybaha yar. Polyester waa retardant dab, oo la kulmay ASTM E-84 Class 1 iyo waxa lagu tilmaamay by UL.
10 oz. Vinylalkohol dahaarka Polyester
vinylalkohol waa dhar ah dahaarka in taagi doonaan si ay ugu qayb hawada ka dhasha. Waxay leedahay heerkulka dhalaalid ah 180 ° F ah iyo in la nadiifiyaa karaa by biiyaha tuubada lagu buufiyo iyo burush. Vinylalkohol waa retardant dab iyo kulmay ASTM E-84 Class 1.
XStatic waa dhar ah anti-Kenia dahaarka in qoreysa wakiil antimicrobial. Waxay leedahay heerkulka dhalaalid ah 250 ° F ah oo lagu mayro karaa qaybaha yar. XStatic waa retardant dab iyo kulmay ASTM E-84 Class 1.
Maro adag saxid High
saxid High Maro adag yahay dhar ah dahaarka Maro adag in qoreysa heerkulka dhalaalisa 500 ° F ah. Waxa kale oo loo isticmaali karaa codsiyada kale. Maro adag waa dahaarka leh iyo yeelan karaan dayuuradaha hawada. Maro adag saxid High waa retardant dab, oo la kulmay ASTM E-84 Class 1 iyo waxa lagu tilmaamay by UL.
cable xiisad waa ikhtiyaarka ugu dhaqaalo badan. Diyaar u ah dhammaan dhexroor, kor u cable Single 30 "dhexroor iyo laab ilaa iyo 48" dhexroor iyo xaafuun oo ka sarreeya. Snaphooks waxaa kullan on 36 xarumood "oo laga heli karo caag, bir. Cable waxaa laga heli karaa galvanized, ahama, iyo vinylalkohol dahaarka leh. Nidaamka wuxuu ka kooban yahay cable ah (3/16 "dhexroor), turnbuckle, eyebolts iyo clamps cable.
b) Hakinta HALO:
nidaamka New ganaax Xiisadda HALO (HTS) siinayaa muuqaalka kore ee aad nidaamka diffuser FlowCon in la badbadiyay marka nidaamka maaraynta hawada off waa. Doorashadan waxa loo isticmaali karaa si fudud mid isku xigta ganaax cable ama hal rail HD in ay sii diffuser FlowCon raadiso badbadiyay aan hawada ku. 10 "36" dhexroor ku koobnayn, doorashooyinkan waa kaamil ah codsiyada meesha diffuser jaban gacanta dejiyeyna waa dhibaato. Qaybaha si fudud loo qaadi karaa oo aan lahayn shaqada oo dheeraad ah ku maydhay. Qaybaha ka mid Heerka cable xiisad mid isku xigta ama nidaamka tareenka hal our HD.
rail New aluminium anodized HD waa nidaamka tareenka premium our. eegno siman cayishay for our nidaamka FlowCon diffuser dhar. Diyaar u ah dhammaan dhexroor, Single tareenka ilaa 30 "dhexroor iyo laab ilaa iyo 48" dhexroor iyo xaafuun oo ka sarreeya. Gliders waxaa kullan on 36 xarumood "oo laga heli karo caag ah. Nidaamka wuxuu ka kooban yahay tareenka HD, taageero rail, couplers, iyo taageerooyinka toosan (links xawaaraha). qallooca gacan diyaar u yihiin inay la kulmaan gacan xusulka.
Next: Micro Flow Fabric Naasaha
Air kabuufi Naasaha
Air mataleysay Naasaha
Air hawadu debecsan Naasaha
Dibi Barn Air Naasaha
Boorka saaridda Naasaha
Exhibition Centre Fabric Air Naasaha
Qarax Caddeyn debecsan Naasaha
Fire caabida Fabric Naasaha
Fire caabida debecsan Naasaha
debecsan Air Ducting
debecsan Air Marinnadu
debecsan HVAC koollo
Cuntada Industry Fabric Air Naasaha
buurka saaridda debecsan Naasaha
Warshadaha dhar Fabric Air Naasaha
Half Round HVAC Naasaha
HVAC dahaaran Naasaha
dahaaran debecsan Air Naasaha
dahaaran debecsan dalool Naasaha
Leisure Place Air Naasaha
dalool debecsan Naasaha
Pool Fabric Air Naasaha
qaab debecsan Naasaha
Round Air Naasaha
Round debecsan Air Ducting
Round HVAC Naasaha
Semi Circle Fabric Naasaha
Semi Round Fabric Naasaha
Sports Fabric Air Naasaha
Supermarket Fabric Air Naasaha
qabriga maryo debecsan Naasaha
qabriga maryo Industry Fabric Air Naasaha
kulul Oo loomana baahno Naasaha
hawadu Air Naasaha
hawadu debecsan Naasaha
Warehouse Fabric Air Naasaha
Cinwaanka: Dhismaha B6, Lingang No.1 Road, Degmada kor marta, Qingdao, Shiinaha, 266500